प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रचण्डपथको गन्तब्य प्रतिष्ठान बनाएर राज्यकोष लुट्ने हो र ? « Clickmandu
प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रचण्डपथको गन्तब्य प्रतिष्ठान बनाएर राज्यकोष लुट्ने हो र ?
प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७३, शुक्रबार ११:५८
काठमाडौं । २०५२ साल फागुनदेखि माओवादीले ‘दीर्घकालिन जनयुद्ध’ सुरु गर्यो । माओबिचारधाराबाट प्रभावित बनेर माओबादीमा लाग्नेहरुको आचरण माओले दिएको निर्देशन अनुसार हुन्छ भनेर मान्नु पर्ने नै हुन्छ ।
‘जनताबाट कुनै सम्पत्ति लिएका छौं भने जस्ताको तस्तै फिर्ता गर, सित्तैमा जनताबाट सियोधागो पनि नलेऊ’ भन्ने माओको निर्देशन थियो ।
दीर्घकालिन जनयुद्धको माध्यमबाट सामन्ती राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र सर्वहाराबर्गको अधिनाकयत्व स्थापना गरेर संसारभर कम्युनिष्ट शासन ब्यवस्थाको विस्तार गर्ने लक्ष्य माओबादी ‘जनयुद्ध’को थियो ।
माओबादी जनयुद्धले विभिन्न आरोह अबरोध पार गर्यो । राजालाई मालिक र जनप्रतिनिधिलाई नोकर देख्ने माओबादी नेतृत्व जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्य र वार्ताबाट शान्ति प्रक्रियामा आयो ।
अझ अर्काे रमाइलो पक्ष के पनि छ भने लामाजी माओबादी जनयुद्धलाई ‘बाँदरे प्रबृत्ति’ भन्थे । लामाजीको मृत्यूपछि माओबादीले उनलाई आफ्नो बनाएको छ । उनका नाममा प्रतिष्ठान स्थापन भएको छ । र, त्यो प्रतिष्ठानलाई यो बर्ष नै पर्यटन मन्त्रालयले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय ब्यवस्थाको स्थानीय संरचनामा प्रहार गरेर सुरु भएको दीर्घकालिन जनयुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय ब्यवस्थाको केन्द्रीयतहमा प्रबेश गरेर सकियो ।
सर्बहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने भन्दै बन्दुक बोकेर हिडेका माओबादीहरु अहिले आफ्नै नेताका नामको प्रतिष्ठान बोकेर राज्यकोषको पैसा निकाल्न सिंहदबार धाइरहेका छन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै माओबादी नेता कार्यकर्ताको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानहरुले ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । माओबादीसँग जोडिएका प्रतिष्ठान २२ वटा भेटिए ।
सुरेश वाग्ले शहिद प्रष्ठिानलाई यो बर्ष मात्रै पर्यटन मन्त्रालयले ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । वाग्ले माओबादी जनयुद्धकालमा राज्यपक्षबाट मारिएका थिए ।
मन्त्रालयले पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानलाई ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । बोगटी जनयुद्ध समाप्त भएपछि मन्त्रीसमेत बनेर कालगतिले मरेका थिए ।
झापामा एउटै ब्यक्तिका नाममा स्थापना भएका दुईटा प्रतिष्ठानले अनुदान पाएका छन् । गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान झापाले ५ लाख रुपैयाँ र गौरीशंकर प्रतिष्ठान झापाले २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।
इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ पनि जनयुद्धकालमै राज्यपक्षबाट मारिएका ब्यक्ति हुन् ।
अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने निर्मल लामा (लामाजी) पनि अब माओबादीको भएका छन् । लामाजीको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको अध्यक्ष माओवादीको माथिल्लो तहका नेता छन् ।
लामाजीसँग लामो समय सँगै काम गरेका पुराना कम्युनिष्ट नेता प्रभुनारायण बस्नेतका अनुसार लामाजीले आफ्ना नाममा प्रतिष्ठान वा सालिक नबनाउनु भनेका थिए । ‘अन्य स्वर्गीय नेताको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर राज्यकोष लुट्ने प्रबृत्तिदेखि उहाँ दिक्क हुनुभएको थियो, मेरा नाममा प्रतिष्ठान बनाउने वा मेरो सालिक बनाउने काम कसैले नगर्नु भन्नु भएको थियो, मेरो नाममा कसैले पनि राज्यकोष लुटेर नखाउन भन्ने चाहनु हुन्थ्यो,’ बस्नेत भन्छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्येका एक नरबहादुर कर्मचार्य जीबनको उत्तरार्धमा माओबादी बने । उनको मृत्यूपछि प्रतिष्ठान बन्यो । नरबहादुर कर्मचार्य प्रतिष्ठानलाई पर्यटन मन्त्रालयले यो बर्ष मात्रै ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
माओबादीले जनयुद्ध छोडेको १० बर्ष नाघिसकेको छ । माओबादीले जनयुद्ध संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यो केन्द्रलाई पर्यटन मन्त्रालयले यो बर्ष ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
माओबादी कार्यकता बासु शाक्यको नाममा परिषद बनेको छ । त्यो परिषदलाई पर्यटन मन्त्रालयले यो बर्ष ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस्तै माओबादीको जनयुद्धकालिन ‘जनसेना’ (पिएलए) को नाममा पनि प्रतिष्ठान बनेको छ । पूर्ब पिएलए महिला प्रतिष्ठानलाई पर्यटन मन्त्रालयले ४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । माओबादीको जनसास्कृतिक प्रतिष्ठानलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।
दोलखा जिल्लामा पर्यटन मन्त्रालयबाट अनुदान पाउने माओबादी प्रतिष्ठानको संख्या निकै छ । दोलखाका शहिद बुद्धिमान स्मृति प्रतिष्ठानले १५ लाख, दलबहादुर थामी स्मृतिले १० लाख, रितबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले ५ लाख, रामबहादुर घिसिङ स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख र तिलक केसी स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान लगेका छन् ।
यस्तै धनुषाको रामबृक्ष यादब स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख र धनुषाकै अजबलाल यादब स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान पर्यटन मन्त्रालयबाट पाएका छन् ।
झापामा एउटै ब्यक्तिका नाममा स्थापना भएका दुईटा प्रतिष्ठानले अनुदान पाएका छन् । गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान झापाले ५ लाख रुपैयाँ र गौरीशंकर प्रतिष्ठान झापाले २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । दाङ्गको कुलानन्द बन्जाडे स्मृति प्रतिष्ठानलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।
भक्तबहादुर स्मृति प्रतिष्ठान मकवानपूरले ५ लाख रुपैयाँ लगेको छ । तराई मधेश जनयुद्ध सहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस्तै सहिद बलराम प्रतिष्ठान बिरेन्द्रनगर चितबनले १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
अहिले देशको प्रधानमन्त्री माओबादी जनयुद्धका परिकल्पनाकार र कार्यान्वयनकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् । सामन्ती राज्यसत्ता ढालेर सर्बहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्न जनयुद्ध सुरु गरिएको उनले भन्दै आएका छन् । सर्बहाराबर्गको आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र राज्यसत्तासम्म पहुँच कायम गर्न भन्दै जनयुद्धकालको समयमा उनले प्रचण्डपथ बनाएका थिए ।
आफ्ना नेताकार्यकताहरु प्रतिष्ठानपथबाट राज्यकोषको रकम लिने कुरालाई प्रचण्डपथले कसरी ब्याख्या गर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा विदेशी मदिराको ठूलो कारोबार हुने पसल ग्रीनलाइन सेन्टरका सञ्चालक बैंकको ऋण नतिरेर